Ọtụtụ puku mmadụ Kartepe oge oyi na-enwe obi ụtọ na Karfest | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliỌtụtụ puku mmadụ iri nke Kartepe nwere obi ụtọ na Karfest
18 / 01 / 2020 41 Kocaeli, General, Mpaghara Marmara, Turkey, TELPHER
Ọtụtụ puku kartepe oge ememme karfest na costu
Na mmekorita ya na Kocaeli Metropolitan Municipal na Obodo Kartepe, ememme snow nke afọ a, nke emere na Sisli Ndagwurugwu na Maşukiye na Kartepe, kwụsịrị site na ihe omume. Onye isi obodo Kocaeli nke Obodo Assoc. Dr. Tahir Büyükakın nwekwara ọ theụ dị ka ụmụ amaala mgbe a gbasara ọrụ ya. Iji sleds jiri sled, Mịnịsta Büyükakün kesakwara ụmụ amaala bi ebe ahụ achịcha sausaji. Aha a ma ama nke egwu ịgba egwu, İrem Derici, kwukwara okwu n'ihu ụlọ ịgba egwu nke Kocaeli Metropolitan Municipal, Assoc. Dr. Tahir Büyükakın kwuru, "Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịhụ ndị niile nọ n'afọ ndụ emume a."
50 puku mmadụ chọrọ ụbọchị niile
Kartepe Winter Festival-KARFEST mepere ụzọ nye ndị hụrụ snow n'anya na nke mbụ n'afọ a. Onye isi obodo Kocaeli Obodo Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli ndị nnọchi anya İlyas Şeker na Haydar Akar, Kartepe Mayor Mustafa Kocaman, AK Party Kocaeli Provincial President President Mehmet Ellibeş, Kartepe District Gọvanọ Altuğ Çağlar, osote onye isi ala Yaşar Çakmak, osote onye isi odee akwụkwọ Hasan Aydınlık, Antik Njak Ndị otu usoro na ihe karịrị ụmụ amaala 50 bịara.
“Ọrụ mbụ anyị dị mma!”
Onye isi ala Tahir Büyükakın, onye pụtara na ikpo okwu ma kpọọ oku ka ndị sonyere n'ọhịa KARFEST kwuru, "Anyị nwere nnukwu obi ụtọ ịhụ ndị niile nọ n'afọ ndụ n'oge ememme a. Ọ bụrụ na anyị na-eme nke a, ọganihu anyị na-agaru ebumnuche “Obi ụtọ City Kocaeli” ga-aga n'ihu. Ka ihe omume mbụ anyị bụrụ nke ịchọrọ na ọrụ anyị ga-aga n'ihu. Kartepe ga-abụ ebe nlegharị anya mara mma na ihe omume ndị a. ”
“IHE KOCAELİ Ga-abụ Obodo”
Onye isi ala Büyükakın kwuru okwu ndị a na njedebe nke okwu ya; “Anyị nwere ohere iji rụọ ọrụ metụtara ihe nkiri njem n'ọtụtụ mpaghara. Nke a bụ mmalite. N’oge ọzọ, anyị ga-ewebata ebe ndị mara mma anyị mara mma n’osimiri na ugwu Kocaeli. Kocaeli ga-abụ obodo ememme. Ọ ga-abụ obodo ebe ndị mmadụ na-achị ọchị. Ememe ndị a ga-abụ ihe obi ụtọ na City Kocaeli. Kocaeli meriri akara ọzọ na KARFEST. ”
KOCAMAN, “KARFEST GA-EGO”
Onye isi obodo Kartepe Mustafa Kocaman kwuru okwu na mmemme ahụ. Maazị Kocaman kwuru, "Ọ bụ ememme ga-adabara ndị bi n'ógbè anyị. Anyị chọrọ ime nke a ogologo oge na mpaghara anyị. Daalụ nke ukwuu, Maazị Metropolitan Mayor. Anyị na-ahazi nke mbụ nke KARFEST, mana nke a ga-aga n'ihu. Kartepe ga-anọgide na-abụ ebe ọrụ a n'oge niile. ”
KARFEST GBASARA NA İREM DERİCİ CONCERT
Ahaziri ya na Kocaeli Metropolitan Municipal na Obodo Kartepe, KARFEST, nke bụ ebe ihe omume na-atọ ụtọ ma na-egosi na Kartepe, adresị maka njem nlegharị oyi, kwụsịrị na Sisli Valley. N'oge ihe omume a, ọtụtụ puku ụmụ amaala nwere ihu igwe na-ahụ n'anya, na-ekpori ndụ n'enweghị nchegbu banyere ihu igwe oyi, jupụtara na ntụrụndụ na İrem Derici, aha a ma ama nke egwu ịgba egwu. Derici, bụ onye bụrụ abụ ọma ya, jisiri ike kpoo mbara ahụ.
NJIKWU EGO NA-EKERE N’IME 24.00
Mgbe KARFEST gosipụtara 19.00, aha a ma ama nke egwu ịgba egwu İrem Derici malitere. Onye okacha amara ama ama ukwe abuo ya, bu ndi biri n’otu dika “Nani Nke Nwee Obi M”, “Beginner Fish”, “Lezienụ Anya n’alụmdi na Nwunye Gị”. Ememme ahụ, ebe ntụrụndụ ahụ gwakọtara na egwu İrem Derici, gara n'ihu na ihe omume mara mma ruo elekere 24.00:XNUMX. N'ehihie, a na-enye ndị bịaranụ ofe, tii, buttermilk na achịcha soseji n'efu.
KARFEST emepeela DOLỌ NCHE KA EGO
A haziri na ndagwurugwu Sisli, otu n'ime akụkụ kachasị mma nke okporo ụzọ Kartepe, nzukọ a ga-abụ ọdịnala maka Kocaeli na Kartepe n'afọ ndị na-abịanụ. Site na ntinye nke ihe karịrị ụmụ amaala iri ise na ụbọchị ahụ dum, na KARFEST, ndị sonyere sonyere ihe ọchị ahụ na snow na mmalite mmemme ahụ.
MAKA obodo na-akpa ọchị
Ìhè ‘Laser’ na-enye ìhè n’abalị. N'ịbụ ndị na-eme egwuregwu nke DJ Mert Erdoğan, ụmụ amaala ji ọ hadụ na-agba egwu. Mgbe KARFEST gosipụtara 19.00, aha a ma ama nke egwu ịgba egwu İrem Derici malitere. Ememme ahụ, ebe ntụrụndụ ahụ gwakọtara na egwu İrem Derici, gara n'ihu na ihe omume mara mma ruo elekere 24.00:XNUMX. Citizensmụ amaala hapụrụ ememme Kartepe Winter-KARFEST na obi ụtọ, a haziri ya na Kocaeli Metropolitan Obodo na Obodo Kartepe.
Ọtụtụ puku mmadụ nabatara Kentcard ọhụrụ maka Akka
Ebe a na-eme ski na Kartepe ruru mita 2
Magazin Kartepe nyere mmalite nke ọrụ
Snowfall na-aga n'ihu na Kartepe Ski Center
Ndị ọkwọ ụgbọala na-achọ ịga Kartepe Ski Center nwere oge siri ike
Mgbachi izu ụka na Kartepe Ski Resort
Ụbọchị Afọ Ọhụrụ na Kartepe Ski Center
Snow na-achọ Kartepe Ski Resort
Ọṅụ nke snow na Kartepe Ski Center
Mmiri snow na Kartepe ski resort na-abịakwute 15 cm
Nke kachasi elu nke Snow na Kartepe
Rtrem Derici egwu
Ememe Oge Kartepe